192.168.8.1 - Olee otú Chọta Ndi an-kpọ rawụta IP?
Olee otú ịchọta ndabara rawụta IP?
Iji hazie rawụta gị, ị ga-abanye ya. Ya mere, mee nke ahụ, ị ​​kwesịrị ịghọta ya IP address. Nwere ike hụ na ndabara rawụta IP address. Adreesị IP nwere nọmba 4 nkewapụrụ na nkwụsị zuru ezu. Adreesị IP nke mpaghara ga-amalite na 192.168. A Routers agụnye IP address dị ka 192.168.0.1 ma ọ bụ 192.168.1.1. Dabere na kọmputa ma ọ bụ ngwaọrụ, usoro ị ga-achọpụta na adreesị IP gị nke rawụta ga-adị iche. N'okpuru ebe a bụ usoro maka nke ọ bụla.
Firstly, ị ga-akọwa onwe gị na ndị a 2 aha - “rawụta IP” & “ndabere IP ọnụ ụzọ ámá.” The rawụta si IP ọrụ dị ka ihe ntinye n'etiti gị ngwá ọrụ & na nabatara umu internet na bụ ya mere ọ pụrụ ọbụna mara dị ka “ndabere adreesị IP ndabere. ” Ngwaọrụ niile ejikọtara na netwọkụ yiri ya na-ewepụta ihe ha chọrọ site na ndabara na rawụta. Ngwaọrụ dị iche iche ga-akpọ ya aha. Windows PCS ga-akpọ ya 'ụzọ mbata' ebe iOS ngwaọrụ ga-echekwa adreesị IP nke rawụta n'okpuru 'router.'
Mgbe Findchọta Ndi an-kpọ rawụta IP, ị nwere ike dị nnọọ dee ya n'ime ihe nchọgharị weebụ na adreesị mmanya ịbanye routers web interface.
Gaa ozugbo iwu site na-ewepụta search mmanya & ide 'cmd'. Window na nwa ojii gosipụtara ebe ịchọrọ ide 'ipconfig'. Maka adreesị ụzọ ndabara na-agagharị maka nsonaazụ.
N'okpuru ebe a bụ usoro kachasị mfe ịlele rawụta IP:
Pịa Apple menu (na ihuenyo elu)
Họrọ 'Nhọrọ mbu nke sistemụ'
Họrọ njikọ ntanetị dị na ya
Push na 'Advanced'igodo
Push na 'TCP / IP'igodo iji hụ adreesị IP na rawụta aka nri
Mbụ, chọta ụzọ: Ngwa> Ngwaọrụ System> Ọnụ & dee 'ipconfig'. Ga - ahụ IP rawụta ka edepụtara ma e wezụga 'inet addr'.
Ọ bụrụ n ’iji iOS8 ma ọ bụ iOS9, ịnyagharịa na Ntọala> WiFi & pịa netwọti ikuku jikọtara gị ugbu a. Ohere DHCP nwere ike ịchọpụta na IP rawụta.
Otu ngwa nke atọ akpọrọ Wi-Fi Analyzer bụ ụzọ kachasị mfe maka ngwaọrụ gam akporo. Connectinggbaso njikọ na ngwa, see na 'View' menu & họrọ 'AP ndepụta'. Will ga-elele 'jikọtara na: [Aha Netwọk]'. Ọ bụrụ na ị kụrụ na ya, a window na-egosipụta na netwọk si Ama na rawụta si IP.
Na taskbar, pịa ebe ịdọ aka ná ntị. Wee, pịa jikọọ na [Aha Netwọk] 'na ndepụta na-apụta. See na aha nke ikuku na netwọk & ọzọ na 'Network' labeelu iji gosi ọdịda na adreesị IP nke rawụta.
Tozọ Chọta Ndi an-kpọ router IP
Iji chọpụta ndabara IP Address nke rawụta dị na-eso n'okpuru nzọụkwụ nyere -
1) nke taskbar Gaa na menu mmalite & ndenye CMD na mpaghara ọchụchọ.
2) mgbe ịtinye iwu CMD, iwu ozugbo na ngosi ojii ga-ekpughe.
3) Dee iwu 'ipconfig', n'ime iwu ozugbo. Iwu a gụnyere - gosipụta ntọala IP ndabara & nhazi nke sistemụ yana rawụta jikọtara ya.
Tozọ ịchọpụta rawụta adreesị IP na Windows
Dee Ogwe njikwa na ogwe ọchụchọ & pịa akara ngosi Ogwe njikwa;
Pịa Lee ntanetị ọkwa & ọrụ n'okpuru Ntanetị & Netwọk;
Pịa na aha Wi-Fi, ka ị nwee ike ịchọta nso njikọta;
Mpio a na-adịbeghị anya ga-ebili. Pịa na nkọwa;
Will ga-ahụ Adreesị IP nkekọrịta in IPv4 Ndabere Gateway.
Categories Olee otú Iji Mail igodo
Tọgharia gị rawụta ka Ndi an-kpọ Ntọala